Xaaladda Libya oo weli kacsan - BBC Somali
Xaaladda Libya oo weli kacsan
23 Febraayo 2011
Image caption Dad mudahaaradaya
Khudbaddii carada lahayd ee shalay uu jeediyay Hogaamiyaha Libya Colonel Gaddafi ayaa waxa ay la kulantay in dadku ay ka soo horjeestaan, gaar ahaan kuwa dhinaca bari ee Libya.
Ninka loo tixgeliyo inuu yahay lambarka labaad ee Gaddafi wasiirka arrimaha gudaha, Abdel Fatah Yunes, ayaa ka mid ah tiro saraakiil sarsare oo ku biiray mucaaradka.
Weriye BBC ka tirsan oo ku sugan bariga Libya ayaa sheegaya in dadku ay ka soo horjeedaan oo ay xanaaqsan yihiin, isla mar ahaantaan ay cabsanayaan.
Weriyaha BBC waxa uu sheegayaa in Libyanku ay hadda aaminsan yihiin in dowladdu ay maamusho qeybo yar oo aay ku jirto caasimadda Tripoli meelo ka tirsan iyo magaalada dhinaca koonfureed ku taalla Sabha.
Colonel Muammar Gadaffi ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay dibedda usoo baxaan oo ay weeraraan waxa uu ugu yeeray baranbarooyin ka soo horjeeda maamulkiisa.
Waxa uu ugu baaqay dadka Libya inay eryadaan dadka dibedbaxay oo ay soo qabtaan kuna wareejiyaan ciidamada ammaanka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay isticmaalka awoodda ciidamada ammaanka Danjiraha Brazil u fadhida Qaramada Midoobay, Maria Viotti, ayaa aqrisay hadalka ay ka soo saareen magaalada New York.